Incwadi yasimahla yokupheka kweswekile - South Africans with Diabetes
Iiresiphi ezimnandi zabantu abanesifo seswekile
Sikunye noPick n Pay , siyile incwadi yokupheka ngokukodwa yabantu abanesifo seswekile abafuna izimvo ngesidlo ngasinye sosuku. Isidlo sakusasa, isidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa, amashwamshwam kunye nezimuncumuncu -kukho into yawo wonke umntu!
Fumana iingcebiso ngezesondlo malunga nendlela yokwakha ukutya okunezakha-mzimba, kunye neeresiphi ezimnandi lonke usapho oluya kulonwabela-nokuba banesifo seswekile. Khuphela ikopi yakho yasimahla (cofa kwiDawunlowudi engezantsi) okanye uyifunde kwi-intanethi.
Kutheni le nto sipapashe incwadi yeswekile yokuphekahy
Ukufumana iingcebiso ezingakumbi zesifo seswekile kunye neengcebiso kuyo yonke indawo yokuhlala kakuhle neswekile, jonga iblogi yethu uoluntu. Uya kufumana amanqaku avela kuluntu lwethu, iingcebiso zeengcaphephe zokutya, iindlela zokuzilolonga kunye nazo zonke iindlela zokuphila ubomi obonwabileyo, obunempilo nesifo sikashukela.
Besisoloko sifuna ukupapasha incwadi yokupheka ethi Sweet Life, kwaye sonwabile kangangokuba ekugqibeleni sinesabelo esinye. Ngenxa yokuba unesifo seswekile, oko akuthethi ukuba kufuneka utye ukutya okukruqulayo. Iiresiphi ezikule ncwadi yokupheka yeswekile zimnandi kangangokuba lonke usapho luya kufuna ukuzitya. Kwaye, ngapha koko, ayikho into enje ngokutya kweswekile – sonke kufuneka silutye olu hlobo lokutya, nokuba sinesifo seswekile okanye hayi.
Joyina uluntu lwethu lwabantu abanesifo seswekile.
Sazise ukuba ucinga ntoni ngale ncwadi yeswekile yokupheka, kwaye zeziphi iiresiphi ongathanda ukuzibona kwixa elizayo! Ungasithumela i-imeyile okanye ujoyine abantu basemMzantsi Afrika abanesifo seswekile kuFacebook.